Khiyaamada nadaafada guriga lagu sameeyo ee guryaha lagu sameeyo | Bezzia
Khiyaamadahan nadiifinta ee guriga lagu sameeyo ayaa kaa caawin doona inaad gurigaaga nadaafad ka dhigato oo jeermiska looga dilo si fudud. Waxyaabaha muhiimka u ah maalinba maalinta ka dambeysa, maadaama qofna uusan rabin inuu saacado ku qaato nadaafadda maalinlaha ah. Si kastaba ha noqotee, shaqooyinka guriga, in kasta oo ay dhib badan yihiin, haddana ficil ahaan waa lagama maarmaan. Ma aha oo kaliya nadaafadda, tan iyo, nadaafadda gurigaaga waxay ku siinaysaa raaxo iyo xasillooni.
Taas macnaheedu maaha inaad saacado ku qaadato nadiifinta, urur yar iyo caawimaadda tabaha nadiifinta, waxaad kuheli kartaa gurigaaga xaalad qumman oo dadaal yar. Intaa waxaa dheer, adeegsiga alaabada dabiiciga ah ee beddeleysa qaybaha kiimikada ee khatarta badan u leh deegaanka. Hal sabab oo dheeraad ah isku day qaar ka mid ah tabahaan nadiifinta.
1 Nadiifinta khiyaamada jikada
2 Musqulaha qummanaanta leh tabaha nadiifinta
3 Wasaqda dhibku dusha sare?
Nadiifinta khiyaamada jikada
Meesha lagu diyaariyo cuntada maalin walba la cuno waa inay ahaataa macbud nadaafad iyo nadaafad. Si looga fogaado isku-soo-ururinta bakteeriyada, waa lagama maarmaan nadiifi dhamaan qalabka jikada iyo maacuunta kuwaas oo loo isticmaalo karinta. Isku day tabahaan nadiifinta guriga lagu sameeyo jikada, way kula yaabi doonaan.
Alwaaxa goynta alwaaxa: Ku shub cusbo cusbo miiska dushiisa iyo liin badhkeed ku xoq qoryaha oo dhan. Ka dib, ku nadiifi sabuuradda biyo diiran iyo saabuuntaada caadiga ah. Qaabkan fudud, wasakhda qoryaha iyo urta ayaa la tirtiraa.
Grater: Si aad gebi ahaanba uga saarto burburka cuntada firidhida, si fudud u xoq rootiga duugoobay isticmaal kasta ka dib. Dhamee nadiifinta hoosta biyaha socda ee diirran iyo u oggolow inaad si buuxda u qalajiso.
Hilibka dubista: Marka lagu jiro kuleylka xilliga hilibka la dubay, khiyaanadan ayaa imaan doonta. Markaad dhamayso karinta oo sariigtu wali kulushahay, ku xoq basasha badhkeed dusha sare. Waad baabi'ineysaa baruurta hab fudud waxaadna u ilaalin doontaa hilibkaaga duban si habboon in jeermiska loo isticmaalo.
Musqulaha qummanaanta leh tabaha nadiifinta
Looma baahna in la isticmaalo dareeraha ama waxyaabaha waxyeelada leh Kiimikooyin buuxa, waxaad kuheli kartaa musqushaada saxda ah xeeladahan guryaha lagu sameeyo.
Ka saar liinta: Qubeyska, qasabadaha iyo dusha sare ee sida joogtada ah biyaha ula socda, waxaa soo muuqanaya nabarro lime ah oo ay adag tahay in laga saaro. Isku day khiyaanadan, ku qas baaquli nus koob oo soodhaha ah iyo isla qamadiga khal cad ah nadiifinta. Codso isbuunyo aagga si loo daaweeyo oo u daa inay wax ka qabato illaa 30 daqiiqo. Biyo raaci si aad u dhammayso.
Madaxa qubeyska: Dusha sare ayaa badanaa la nadiifiyaa, laakiin caaryada iyo bakteeriyada ayaa ku urursan gudaha. Waxaad u baahan doontaa a rubuc koob oo khal khal ah iyo saddex qaybood oo biyo ah. Si fiican u walaaq oo geli madaxa qubeyska, ha u hawl galo ugu yaraan nus saac. Si aad u dhamayso, waa inaad si fiican u qalasho ka hor intaadan dib u xoqin qaybta kore.
Tuubooyinka xirmayHadhaagu wuxuu ku ururaa dhuumaha, abuurista jeermisyada noolaha iyo ur xun. Ku shub 6 qaado oo soodhaha ah godka bullaacadaha. Sidoo kale ku dar koob oo khal khal ah oo u daa inuu wax ku dhaqmo 20 ama 30 daqiiqo. Ugu dambeyn, kudar 3 litir oo biyo aad u kulul ah inyar oo yar si looga takhaluso qashinka ku ururay dhuumaha.
Wasaqda dhibku dusha sare?
Ka saarida wasakhda dusha sare ma sahlana, maadaama aysan suuro gal aheyn in furaash lagu rido mashiinka dharka, tusaale ahaan. Laakiin si fudud ayaad u nadiifin kartaa furaash madax adag ama wasakhda fadhiga.
Wasaqda dhiigga: Codso qadar yar oo ah hydrogen peroxide oo ku taal dhiiggaU daa inaad wax qabato daqiiqado yar oo ku saar maro cudbi ah oo qoyan.
Kaadi iyo dhidid: Wixii wasakhda dhididka ah iyo dheecaanka kaadida ah, khal kaliya ku buufi wasakhda dhalada lagu buufiyo. U ogolow badeecadu inay shaqeyso 10 daqiiqoka dib ku saydhaa soodhaha oo u oggolow isku darku inuu gebi ahaanba qallalo. Si aad udhameyso, waa inaad kaliya ka soo qaaddaa hadhaaga nadiifiyaha faakiyuumka.
Sida aad u aragto, iyadoo la adeegsanayo alaab fudud oo fudud oo aad qaali u ah, waxaad ku ilaalin kartaa gurigaaga nadiif iyo jeermis dhaqse Adigana, Ma taqaannaa khiyaano kale oo guryaha lagu nadiifiyo oo nacas ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Khiyaamada nadaafada guriga iyo guriga ee guriga
Haddii walwal uusan kuu oggolaan inaad seexato, qor tilmaamahan!